Ogige PVC na -agbanwe agbanwe na -emepụta ihe na -emepụta ihe na onye na -ebubata ya INPVC
Ekweghị ekwe: ShoreA35-55
Agba: Uzo, Agba
Usoro: Ọgwụ na ịkpụzi
INPVC na -enye 100% ogige PVC na -amaghị nwoke ejiri mee ihe maka imepụta akpụkpọ ụkwụ anụ ụlọ. Akpụkpọ anụ granules PVC anyị nwere nnukwu ihe mgbochi, arụmọrụ na nhazi, ihe ọhụrụ na ọdịdị dị elu. Anyị na -enye usoro ahaziri iche & nke pụrụ iche dịka ihe achọrọ na nkwa nke ịdị mma na ọrụ.
Ekweghị ekwe ShoreA40-50
Agba Piel, Eke, Red, Green, Yellow, Green, Blue ma ọ bụ ahaziri ya
Ngwa Akpụkpọ ụkwụ Insole, Akpụkpọ ụkwụ naanị, Rainboots, Gumboots, eriri na -amị amị, akpụkpọ ụkwụ,
Akpụkpọ ụkwụ ụfụfụ, akpụkpọ ụkwụ Pet, akpụkpọ ụkwụ Africa, akpụkpọ ụkwụ nkịtị, akpụkpọ ụkwụ egwuregwu
Atụmatụ Ntọala Eco-enyi na enyi. Enweghị isi. Na -adịghị egbu egbu
Na -adịgide adịgide. Eyi eguzogide. Na-adịghị amị amị
Imegide Mmanụ / Acid / Abụba / Ọbara / Mmanya Ethyl
Ekwe ekwe. Abrasion na -eguzogide. Ọgwụ mgbochi mmiri
Mbukota 25kg /akpa Kraft
Ibu Ibu 20,000kgs-25,000kgs/20'C;
A na -eji ogige akpụkpọ ụkwụ PVC n'ọtụtụ ebe na ntinye akpụkpọ ụkwụ anụ ụlọ. Ngwongwo PVC dị nro ma na-agbanwe agbanwe nwere nguzozi dị elu, enweghị isi, etinyere nguzogide dị mma na mpụga. Enwere ike ịhazi pellets PVC dị elu na kristal ka ọ bụrụ ọcha, aja aja, odo na ihe ndị ọzọ.
INPVC bụ ọkachamara na ngwakọta PVC maka ngwa n'ozuzu dịka ịgba ntụtụ, ịpụ apụ na ịfụ ịfụ. Site na ahụmịhe zuru oke nke nrụpụta PVC, anyị na -enye usoro ahaziri ahaziri & nke pụrụ iche dịka ihe achọrọ na nkwa nke ịdị mma na ọrụ.
Nke gara aga: Ogwe ngwongwo ngwongwo PVC ogige maka akpụkpọ ụkwụ
Osote: Ihe mkpuchi PVC doro anya maka akpụkpọ ụkwụ ụmụaka jelii akpụkpọ ụkwụ ụmụaka